Amanqaku enkqubo nganye yoLawulo loMxholo kufuneka abenayo ukuSebenzisa iiNjini zoKhangelo | Martech Zone
Amanqaku enkqubo nganye yoLawulo loMxholo kufuneka abenayo iiNjini zokuKhangela
NgoLwesihlanu, Novemba 6, 2020 NgoLwesihlanu, Novemba 6, 2020 Douglas Karr
Ndidibene nomthengi osokolayo kwinqanaba lokukhangela kwiinjini. Njengoko ndijongile Inkqubo yoLawulo loLawulo (CMS), ndakhangela ezinye zezona ndlela zisisiseko ndingazifumani. Phambi kokuba ndinike uluhlu lokutshekisha ukuze ndiqinisekise ngomboneleli wakho we-CMS, kufuneka ndiqale ndixele ukuba akukho sizathu senkampani ESINGENAYO inkqubo yolawulo lomxholo kwakhona.
I-CMS iya kukubonelela okanye iqela lakho lokuthengisa ukuba utshintshe indawo yakho kubhabho ngaphandle kwesidingo somphuhlisi wewebhu. Esinye isizathu sokuba kutheni Inkqubo yoLawulo loLawulo Isidingo kukuba uninzi lwazo luzisebenzisele ezona ndlela zilungileyo zokwandisa indawo yakho.
I-SEO purists inokuphikisana nezinye zeempawu endizoxoxa ngazo apha ngenxa yokuba zinokuthi zingabonakalisi ngokuthe ngqo kwinqanaba. Ndingaphikisana nayo nayiphi na iGinjini yokukhangela, nangona kunjalo, ukuba injini yokukhangela ikumgangatho wamava omsebenzisi- hayi ukukhangela ubuchwephesha beenjini. Ngcono uyilo lwakho lwendawo yakho, utyale umxholo omkhulu, ukukhuthaza loo mxholo, kunye nokuzibandakanya nabasebenzisi bakho… ngcono indawo yakho eya kuyenza kuluhlu lokukhangelwa kwezinto eziphilayo.
Ubucukubhede be umkhangeli we-injini yokukhangela ufumanisa njani, izalathiso kunye nenqanabaIndawo yakho ayitshintshanga kangako kule minyaka… kodwa ukubanakho ukutsala iindwendwe, yenza ezo ndwendwe zabelane ngomxholo wakho, kwaye iinjini zokukhangela ziphendule ngokuguqukayo. I-SEO elungileyo yile amava omsebenzisi amahle… Kwaye inkqubo yolawulo lomxholo ibalulekile kwimpumelelo yakho.
Umxholo woLawulo lweeNqaku ze-SEO
wonke Inkqubo yoLawulo loLawulo kufuneka ibenakho okanye iphunyezwe ngezi zinto zilandelayo:
Izincedisi: Izipele kunye ne-SEO? Kulungile… ukuba ulahlekelwe yindawo yakho kunye nomxholo, kunzima ukubeka inqanaba. Ukuba nesipele esomeleleyo esinee-backups ezongeziweyo kunye neemfuno, ii-backups ezingaphandle kwesiza kunye nokubuyisela kuluncedo kakhulu.
Imvuthuluka yesonka: Ukuba unolwazi oluninzi oluhleliweyo ngokulandelelana, ukubanakho kwabasebenzisi (kunye neinjini yokukhangela) ukuqonda ukuba ulawulo lubaluleke kakhulu kwindlela abawujonga ngayo umxholo wakho kwaye bayikhombise ngokufanelekileyo.
Izaziso zebrawuza: I-Chrome kunye ne-Safari ngoku zibonelela ngezaziso ezidibeneyo kunye neenkqubo zokusebenza. Xa umntu othile efika kwindawo yakho, bayacelwa ukuba bangathanda ukwaziswa xa umxholo uhlaziyiwe. Izaziso zigcina iindwendwe zibuya!
CachingNgalo lonke ixesha iphepha liceliwe, isiseko sedatha sikhangela umxholo kwaye sidibanisa iphepha. Oku kuthatha izixhobo kunye nexesha… ixesha elibuhlungu ukwenziwa kweinjini yokukhangela. Ukufumana i-CMS okanye ukubamba indawo ene-caching amandla ngundoqo ukukhawulezisa indawo yakho kunye nokunciphisa izixhobo ezifunekayo kwiserver yakho. Ukugcina i-caching kunokukunceda xa ufumana ukuhlaselwa kwetrafikhi… amaphepha agciniweyo kulula ukuhambisa kunamaphepha angafihlwanga. Ke unokufumana iindwendwe ezininzi ngakumbi kunokuba unakho ngaphandle kokubamba i-caching.
Ii-URL zeCanonicalNgamanye amaxesha iisayithi zipapashwa ngephepha elinye elinendlela ezininzi. Umzekelo olula ukuba ithambeka lakho linokuba nalo http://yourdomain.com or http://yourdomain.com/default.aspx. Ezi ndlela zimbini zikwiphepha elinye zinokwahlulahlula ubunzima beekhonkco ezingenayo apho iphepha lakho lingabekwanga kwindawo elinokubakho. I-URL ye-canonical sisiqwenga esifihliweyo sekhowudi ye-HTML exelela iinjini zokukhangela ukuba yeyiphi i-URL ekufuneka beyisebenzisile kwikhonkco.
Amazwana: Izimvo zongeza ixabiso kumxholo wakho. Qiniseka nje ukuba unokumodareyitha izimvo njengoko kukho itoni ye-bots phaya ngaphandle kokugaxela amaqonga e-CMS ukuzama ukuvelisa amakhonkco.
Umhleli womxholoUmhleli womxholo ovumela i-H1, i-H2, i-H3, eyomeleleyo kunye neetalic ukuba zisongelwe ngombhalo. Ukuhlelwa kwemifanekiso kufuneka kuvumele izinto ze-ALT ukuba ziguqulwe. Ukuhlelwa kwethegi ye-anchor kufuneka kuvumele TITLE ukuhlela. Ngelishwa ukuba zingaphi iinkqubo ze-CMS ezinabahleli bezinto ezingalunganga!
Inethiwekhi yokuThumela: A yomxholo wenethiwekhi uthungelwano lweekhompyuter ezibekwe ngokwendawo ezigcina izixhobo ezi-static ekuhlaleni… evumela amaphepha ukuba alayishe ngokukhawuleza okukhulu. Kananjalo, xa iCDN iphunyezwa, izicelo zakho zephepha zinokulayisha iiasethi kwiseva yakho yewebhu Kunye neCDN yakho ngaxeshanye. Oku kunciphisa umthwalo kwiseva yakho yewebhu kwaye kunyusa isantya samaphepha akho kakhulu.
Ukusebenza okuphezulu: Isantya yiyo yonke into xa kufikwa kwiinjini zokukhangela. Ukuba uzama ukugcina iirandi ezimbalwa xa ubamba, utshabalalisa ngokupheleleyo amandla akho okufumana isalathiso kunye nokubekwa kakuhle kwiinjini zokukhangela.
Ukunyanzelwa komfanekiso: Imifanekiso ihlala ithunyelwa ngaphandle kwiifayile ezinkulu ngokungeyomfuneko. Ukudityaniswa kwesixhobo sokucinezelwa komfanekiso ukunciphisa ubungakanani befayile kunye nokutshintsha ubungakanani bemifanekiso ukuze ujonge ngokupheleleyo kubalulekile.
Umdibaniso: Isakhono sokwandisa ukusebenza komxholo wakho kunye nesizukulwane esikhokelayo, ukuthengisa nge-imeyile, ukuthengisa ngokuzenzekelayo, intengiso yemidiya yoluntu, kunye namanye amaqonga anokunceda ukuba ufumane kwaye ugcine ukugcwala.
Ukonqena Ukulayisha Imifanekiso: Iinjini zokukhangela zithanda umxholo omde ngemithombo yeendaba ezininzi. Kodwa ukulayisha imifanekiso kungacothisa indawo yakho ekukhanyeni. Ukulayisha ngobuvila yindlela yokulayisha imifanekiso ngelixa iphepha liskrola. Oku kuvumela iphepha ukuba lilayishe ngokukhawuleza okukhulu, emva koko bonisa kuphela imifanekiso xa umsebenzisi efikelela kwindawo yayo.
Ulawulo lweeNkokeli: Emva kokuba amathemba elifumene inqaku lakho, banxibelelana njani nawe? Ukuba nabaqulunqi beefom kunye nesiseko sedatha sokubamba isikhokelo kunyanzelekile.
Iinkcazo zeMeta: Iinjini yokukhangela zihlala zifaka inkcazo yemeta yephepha kwaye zibonise ukuba phantsi kwesihloko kunye nekhonkco kwiphepha leziphumo zeinjini yokukhangela. Xa kungekho nkcazo yemeta ekhoyo, iinjini zokukhangela zinokubamba isicatshulwa ngokungacwangciswanga kwiphepha… isenzo esiya kunciphisa amaxabiso akho okucofa kwiikhonkco zakho kwiinjini zokukhangela kwaye zinokwenzakalisa isalathiso sephepha lakho. I-CMS yakho kufuneka ikuvumele ukuba uhlele inkcazo yemeta kwiphepha ngalinye lesiza.
mobile: Uphendlo lweselfowuni luyaqhuma ekusebenziseni njengoko ii-smartphones kunye neetafile zamkelwa kuzo zonke. Ukuba i-CMS yakho ayikuvumeli iwebhusayithi ephendulayo esebenzisa i-HTML5 kunye ne-CSS3 (olona khetho lulungileyo)… okanye ubuncinci uqondise kwakhona kwitemplate yefowuni elungiselelwe kakuhle, awuyi kubekwa kwinqanaba lokukhangelwa ngeselula. Ukongeza, iifomathi ezintsha ezinje nge AMP unokufumana umxholo wakho ubekwe kakuhle kukhangelo olwenziwe kwizixhobo zikaGoogle.
Iingxowa: Xa upapasha umxholo wakho, i-CMS kufuneka ingenise ngokuzenzekelayo indawo yakho kuGoogle nakwi-Bing ngaphandle kongenelelo. Oku kuyakuqala ukukhasa kwiinjini yokukhangela kwaye ufumane umxholo wakho omtsha (okanye ohleliweyo) okhutshwe yinjinjini yokukhangela. Iinjini zeCMS ezinobunkunkqele ziya kuthi Ping iinjini zokukhangela xa ucwangcisa umxholo.
Ukubuyisela kwakhonaIinkampani zihlala zitshintsha kwaye zakha ngokutsha iisayithi zazo. Ingxaki yile kukuba injini yokukhangela isenokukhomba i-URL kwiphepha elingekhoyo. I-CMS yakho kufuneka ikuvumele ukuba ubhekise ukugcwala kwiphepha elitsha kwaye uhambise injini yokukhangela apho ukuze bafumane kwaye babonise iphepha elitsha.
Iziqwenga ezityebileyoIinjini yokukhangela zibonelela ngeefomathi ze-microdata zokuchongwa kunye nokuchongwa kwesonka kwindawo yakho. Rhoqo, olu phawu kufuneka lusetyenziswe ngaphakathi komxholo owusebenzisayo nge-CMS yakho okanye unokufumana iimodyuli ezikuvumela ukuba uziphumeze ngokulula. Iizithonga ezityebileyo njengeSchema kaGoogle kunye neOpenGraph yeFacebook yokuphucula iziphumo zeinjini yokukhangela kunye nokwabelana kwaye kuya kuqhuba iindwendwe ezininzi ukuba zicofe.
robots.txt: Ukuba uya kwingcambu (idilesi yesiseko) yedomeyini yakho, yongeza iirobhothi.txt kwidilesi. Umzekelo: http://yourdomain.com/robots.txt Ngaba ikhona ifayile apho? Ifayile yeerobhothi.txt yifayile yemvume esisiseko exelela i-injini yokukhangela i-bot / spider / crawler ukuba yeyiphi imikhombandlela ongayihoyiyo kunye nokuba yeyiphi imikhombandlela yokukhasa. Ukongeza, unokongeza ikhonkco kwimephu yendawo yakho kuyo!
Ukutya kweRSS: Ukuba unezinye iipropathi kwaye ufuna ukubhengeza ibhlog yakho, ukuba ne-RSS feeds yokupapasha ngokulula izicatshulwa okanye izihloko kwiziza zangaphandle ziyimfuneko.
ukufunaIsakhono sokukhangela ngaphakathi kunye nokubonisa iziphumo ezifanelekileyo kubalulekile kubasebenzisi ukuba bafumane ulwazi abalufunayo. Iziphumo zamaphepha einjini yokukhangela zihlala zibonelela ngendawo yesibini kubasebenzisi bokukhangela kwindawo leyo!
U khu seleko: Imodeli yokhuseleko eqinileyo kunye nokusingathwa okukhuselekileyo kuya kuyikhusela indawo yakho ekuhlaselweni okanye ekubekeni ikhowudi enobungozi kuyo. Ukuba indawo yakho ifumana ikhowudi engalunganga kuyo, uGoogle uya kukukhupha kwisalathiso kwaye akwazise xa kuthelekiswa nee-Webmasters. Kunyanzelekile ukuba ube nohlobo oluthile lokujonga okanye ukhuseleko oludityaniswe kwi-CMS yakho okanye kwiphakheji yakho yokubamba kwezi ntsuku.
Upapasho lweNtlalo: Isakhono sokupapasha ngokuzenzekelayo umxholo wakho ngezihloko ezenzelwe wena kunye nemifanekiso ziya kwenza ukuba umxholo wakho kwabelwane ngawo. Umxholo ekwabelwana ngawo ukhokelela ekukhankanyeni umxholo wakho. Ukukhankanywa kukhokelela kunxibelelwano. Kwaye amakhonkco akhokelela kwinqanaba. I-Facebook ikwazisa amaNqaku akhawulezileyo, ifomathi yokupapasha amanqaku apheleleyo ngokuthe ngqo kumaphepha ebhrendi yakho.
Umanyano: Ngelixa abantu abafunda izithuba kubafundi be-RSS bewile ikakhulu ecaleni kwendlela endaweni yokwabelana ngokwasentlalweni, ukukwazi ukudibanisa umxholo wakho kwiziza nakwizixhobo kubalulekile.
UkuThengisa: Iinjini yokukhangela ubukhulu becala ziyayityeshela i-meta tag yamagama aphambili, kodwa ukumakisha kunokuza kube kuluncedo- ukuba akukho enye into enokugcina engqondweni amagama aphambili ojolise kuwo kwiphepha ngalinye. Iimpawu zihlala zinceda ukufumana nokubonisa izithuba ezifanelekileyo kunye neziphumo zophando ngaphakathi kwendawo yakho.
Umhleli Wetemplate: Umhleli wetemplate eyomeleleyo othintela nakuphi na ukusetyenziswa kweetafile ze-HTML kwaye ivumela i-HTML entle ecocekileyo kunye neefayile zeCSS ezifomathiweyo ukufomatha ngokufanelekileyo iphepha. Kuya kufuneka ukwazi ukufumana nokufaka iitemplate ngaphandle kokwenza naluphi na uphuhliso olubalulekileyo kwindawo yakho ngelixa ugcina umxholo wakho ngaphandle kwemicimbi.
Iimpawu ze-XMLImephu yesayithi eveliswe ngamandla yinto ephambili enika iinjinjini zokukhangela nge imephu ukuba uphi umxholo wakho, ubaluleke kangakanani, kwaye ugqibele ukutshintsha nini. Ukuba unesiza esikhulu, iisemaps zakho kufuneka zixinaniswe. Ukuba imephu yesayithi ingaphezulu kwe-1Mb, i-CMS yakho kufuneka ivelise iimephu ezininzi zeeseti kwaye emva koko uzidibanise ukuze injini yokukhangela ikwazi ukuzifunda zonke.
Ndizophuma ndibelilungu apha ndiyokutsho; ukuba iarhente yakho ikuhlawulisela uhlaziyo lomxholo kwaye awunakho ukufikelela kwinkqubo yolawulo lomxholo ukuze ulungiselele indawo yakho… lixesha lokuba uyishiye loo arhente kwaye uzifumanele entsha enomelele Inkqubo yolawulo lomxholo. Iiarhente ngamanye amaxesha ziyila iisayithi ezintsonkothileyo ezimileyo kwaye zifuna ukuba utshintshe utshintsho lomxholo njengoko uzifuna… engamkelekanga.
tags: ampcms okoimicodataoonomadudwane abatyebileyoiirobhothi.txtenjini yokukhangela nounSEOUluhlu lokutshekishaeKhayaI-wordpress seoxml imephu yendawo
Douglas Karr Friday, November 6, 2020 Friday, November 6, 2020
Kutheni ujoliso loMxholo lubalulekile kubaThengisi abaHamba ngeKuki-eKamva eliNcinci
Qhubeka usebenzisa ela Lizwi "Uyilo"…
Nov 13, 2010 ngo-12:37 PM
Intoni? Akukho zincomo ezithile? Inkampani iyazi njani ukuba yeyiphi i-CMS abayidingayo okanye ukuba isisombululo siya kusebenza njani? Uluhlu oluhle, Mnu. Karr.
Scott Armstrong MBA
Mar 20, 2011 ngo-4: 28 AM
Uthando olu luhlu! Ngoku sisikhokelo sam njengoko ndiqala ukuthengela iCMS. Bendisenza lonke uyilo lwewebhu ngokwam, kodwa ndifuna ukunciphisa ixesha endilichitha ndibhala ikhowudi ukuze ndikwazi ukonyusa ixesha endilichitha ekucwangciseni iwebhusayithi. Ngaba unazo naziphi na iingcebiso kwiinkqubo ze-DIY eziqhelekileyo (i-WordPress, i-Joomla, njl.)?
Oktobha 8, 2011 ngo-6: 43 PM
Loo URL iyasebenza, lundwendwe. Nangona kunjalo, i-CMS elungileyo iya ku-ping / ingenise imephu yesayithi yakho ngalo lonke ixesha upapasha umxholo!
Oktobha 8, 2011 ngo-6: 45 PM
Ekuphela kwento endiya kuyongeza kule nto ngoku kukuba iqonga lokubhloga kufuneka libonise ngokufanelekileyo iithegi ze-rel = "umbhali" kwaye uvumele uqhagamshelo kwiProfayile kaGoogle ukuze imifanekiso yombhali ibonakale kwiziphumo zokukhangela.
Oktobha 8, 2011 ngo-10: 38 PM
Ndivuma ngokupheleleyo-Akukho nkampani kufuneka ibe yiCMSless.